Iimveliso ezikhulayo kunye neemveliso zentengiso, izisombululo, izixhobo, iinkonzo, amaqhinga, kunye nezona ndlela zilungileyo zokwenziwa kwamashishini avela kubabhali be Martech Zone. Kubandakanya ubukrelekrele bokwenziwa, ii-bots, ukusetyenzwa kolwimi lwendalo, ukufunda ngomatshini, ubunyani benyani, njl.
accessiBe: Yenza nasiphi na iSiza esiQinisekisiweyo sifikeleleke ngokuSebenzisa ubukrelekrele bokwenziwa
NgoLwesibini, Meyi 31, 2022 NgoLwesibini, Meyi 31, 2022 Douglas Karr
Ngelixa imimiselo yokufikelela kwindawo sele ikhona iminyaka, iinkampani ziye zacotha ukuphendula. Andikholelwa ukuba ngumcimbi wovelwano okanye uvelwano kwicala leenkampani… Ndiyakholelwa ngokwenene ukuba iinkampani zisokola ukuhambelana nazo. Umzekelo, Martech Zone Amanqanaba amabi ngokufikeleleka. Ixesha elingaphezulu, bendisebenza ukuphucula ikhowudi, uyilo, kunye nemethadatha efunekayo… kodwa andikwazi ukuqhubeka nokugcina nje